Wamkelekile kwiLali House indlu ekwilali encinci iZali Log kwicala lelizwe laseSlovenia. Uyakonwabela kwindawo eyi-minimalistic kodwa efudumeleyo kwaye epholileyo egcwele izinto zendalo. Ungonwabela indawo ezolileyo nje yokufunda kwaye uphumle ngaseziko okanye ungahamba ngokulula ehlathini, ukunyuka intaba okanye ukukhwela ibhayisekile intaba kwindawo engakhange ichukunyiswe. Ngemoto uya kukwazi ukufikelela eLjubljana, echibini laseBled kunye nentlambo yeSoča ngaphantsi kweyure enye. Wamkelekile kwaye uzive usekhaya!
Igumbi lokuzilungiselela elinomnyango wabucala libekwe kumgangatho wesibini. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo ngesitovu segesi, imicrowave, ioveni yombane kunye nezinye izixhobo zasekhaya. Indawo yethu inokuhlala ngokukhululekileyo abantu abayi-6. Kukho i-sofa eyongezelelweyo kwigumbi lokuhlala. Uya kuba ne-balcony yabucala kwaye wabelane ngegadi enethafa. Le ndawo ilungele usapho kwaye izilwanyana zasekhaya zivumelekile.
Kukho indawo yokupaka yasimahla efumanekayo kufutshane nendlu. Ngaphezulu kweemoto ezi-2 kuya kufuneka upake simahla imizuzu emi-2 uhambe. Siza kunxibelelana ngeposi, ngefowuni okanye ngetekisi. Siceba ukudibana neendwendwe kwindawo yokungena ukuze sinikezele ngezitshixo.
Irhafu yabakhenkethi ibandakanyiwe kwixabiso.
Ilali enefama ezithile ezisebumelwaneni kunye nendalo engekachukunyiswa.
Sifumaneka ngefowuni kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi. Siya kukuvuyela ukukunika iingcebiso kunye neengcebiso apho ungaya khona kwaye wenze ntoni.